ဒူးပလာယာခရိုင်ဥက္ကဌ ပဒိုစောရွှေမောင်း တာဝန်က နှုတ်ထွက်အနားယူ – PVTV Myanmar
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)ရဲ့ ဒူးပလာယာခရိုင် ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ပဒိုစောရွှေမောင်းက ခရိုင်အတွင်းမှာ အရေးပေါ်အစည်း အဝေးခေါ်ယူပြီးတော့ တာဝန်ကနေနှုတ်ထွတ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပြီလို့ ကေအိုင်စီသတင်းဌာနက ခရိုင်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်ကို ကိုးကားပြီးတော့ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
ကေအိုင်စီသတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာတော့ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ခရိုင်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ နှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို တရားဝင်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခရိုင်ဥက္ကဌသက်တမ်း မကုန်ဆုံးသေးပေမယ့်လည်း လာမယ့် ခရိုင်ကွန်ဂရက်ကျင်း ပတဲ့အချိန် အနားယူခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“အခုကနေ စနားလိုက်ပြီးပေါ့နော်။ အခု စနားလိုက်တာ သူ လုံး၀ မလုပ်တော့ဘူး။ ရှင်းရှင်း မလုပ်တော့ဘူး။ အဲ့လိုပေါ့နော်။ သက်တမ်းပြည့် တဲ့အထိ သူနားလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ သူညီလာခံ ပြန်ခေါ်ပေးပြီးတော့ လွဲလိုက်ပေါ့ အဲ့လိုမျိုး” လို့ ခရိုင်တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်ကို ကိုးကားပြီး ကေအိုင်စီသတင်းဌာနက ဖော်ပြထားတာပါ။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ဗဟိုနဲ့ ခရိုင်အဆင့် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ သက်တမ်းက ၄ နှစ်ဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ခရိုင်ဥက္ကဌ တာဝန်တွေကို တပ်မဟာ ၆ တပ်မဟာမှူးထံ တာဝန်လွှဲပြောင်းထားတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
NUG မှ မိဘပြည်သူများသို့ ( စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာန) တော်လှန်ရေးပြည်သူ့အစိုးရ တနှစ်မပြည့်ခင် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား မေးမြန်းခဲ့မှုများ ……. ______________________________ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာန​၏ စစ်ကောင်စီကို ဘဏ္ဍာရေး စစ်မျက်နှာဖွင့်တိုက်စစ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ပြည်သူလူထုအပေါ် အဓိက အသိပေးချင်သည့်အချက်များ ငွေကြေးစီးဆင်း မှုအခက်အခဲကိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အ
ခြန္ လာေရာင္ says:
2022-01-29 at 12:37 PM
Nai OO says:
2022-01-29 at 12:40 PM
ဟာာာ သတင်းကောင်းပဲ KNU မှာ ဒီ Gen Lee ကြီးတွေ မွှေနေတာ အတော်ကြာနေပီ ။ ထုတ်ပစ်သင့်တာကြာနေပီ ။ စစ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေသိနေမယ်ဆို သတိထားကြပါ KNU တပ်အင်အားတွေ Formations တွေ ကို ပြန် ပြောင်းတာတွေ အမြန်လုပ်သင့်ပါတယ် ။
Jean Luois Lambot says:
2022-01-29 at 12:42 PM
ဖေါင်းဒိုင်းမထိခင် စောစော အနားယူလိုက်ပါ ဖဒိုဂျင်းလီး
ထွက်သင့်တာကြာပြီး​လေ အဲ့ဒါဆို ​ဘော ​​ကောင်း​ကောင်းကိုင် မ လို့ရပြီး​ပေါ့
Saw Andrew Han says:
NCA ကအလုပ်မဖြစ်လို့ NBA သွားတော့မလို့ထင်တယ်😂
ကရင်ကြီး ဖဒိုကြီးကို မွန်လေသံနဲ့ပြောလိုက်တယ်
Ko Maung Maung Mae says:
2022-01-29 at 12:46 PM
ေရႊေမာင္း လဲ မန္းၿငိမ္းေမာင္ နဲ႕. 😆😆😆😆😆